जीवन सुखद बनाउने ७ तरिका | NepalDainik
१. परिवर्तन स्वीकार्नोस्
जीवनलाई सुखद र स्वास्थ्यपूर्ण बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । यदि तपार्इंको दिनचर्या यान्त्रिक प्रकृतिको छ भने तपाईंमा अनेकौं समस्या देखिन सक्छन् । दिनभर कामको थकान, अव्यवस्थित खानपिन र काम सक्ने वित्तिकै ककटेलको साथले कहिँ कतै असर गरिरहेको हुनसक्छ । तपाईंकालागि शारीरीक अभ्यासको समय पनि नहुन सक्छ । मानसिक पीडा र डिप्रेसनले छोप्यो भने त झन् तपार्इंले कहिल्यै पनि राहत महसुस गर्न सक्नुहुन्न । त्यसैले आफ्नो जीवनपद्दतिलाई एउटा स्वस्थ तालिकामा ढाल्ने प्रण गर्नुहोस् । र, त्यो परिवर्तनलाई स्वीकार्नुहोस्।
२. दिमाग, शरीर र आत्माको सम्मान
तपाईंको अस्तित्व केमा निर्भर छ ? मान्नोस् या नमान्नोस् –दिमाग, शरीर र आत्मा नै तपार्इंको अस्तित्वको समीकरण हो । यी तीन तत्वले जहिले पनि सन्तुलन खोजिरहन्छन् । काम, सम्बन्ध, पैसा, सिर्जना, अध्यात्म र खुसीजस्ता विषयबीच तालमेल छैन भने तपार्इंको अस्तित्व पनि सन्तुलनमा हुँदैन । सामाजिक जीवन, घरायसी वातावरण, स्वास्थ्य र व्यायामबीच समन्वय गरेको अवस्थामा तपार्इंले आफूमा धेरै परिवर्तन महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को कुरा, यदि तपाईं आफूमा समस्या छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने शरीरले बोलेको सुन्नोस् । कसरी सुन्ने रु कसरी थाहा पाउने, सन्तुलन बिग्रिएको ? टाउको दुख्नु, माइग्रेन हुनु, पाचन प्रणाली बिग्रिनु, अपाच्य हुनु, तनाव हुनुजस्ता कुराहरु नै पर्याप्त हुन्छन्, आँफैले आँफैलाई जाँच्न । त्यसैले के छ त समस्या भन्ने थाहा पाउनुस् । बुझ नपचाउनुस् । र, समस्याहरुको निराकरण खोज्नुहोस् । आफुँले आफैलाई सम्हाल्न सके मात्र अरुलाई पनि सम्हाल्न सकिन्छ।
३. समय अनुकुल व्यायाम गर्नुहोस्
रोग लाग्ने खतराबाट मुक्त हुनकालागि सबैभन्दा अचूक मन्त्र हो व्यायाम । यसकालागि शारीरिक अभ्यासका विभिन्न तरिकाबारे जानकारी राख्नोस् । स्वस्थ हुन आफ्नो क्यालोरी खर्च गर्न विभिन्न खेल पनि खेल्न सकिन्छ । जस्तै फुटबल, व्याटमिन्टन, दौड, योगा, कराँते।
४. पौष्टिक आहार
खानामा ध्यान दिँदा मात्र पनि तपार्इंको स्वास्थ्य गतिलो हुनसक्छ । एउटै खानामा सम्पूर्ण पौष्टिकता पाईँदैन । कसैलाई प्रोटिन मन पर्छ, कसैको शरीरले मासु पचाउँदैन । व्यक्ति पिच्छे शरीरको प्रकृती पनि फरक हुन्छ । केही खाँदा शरीरले प्रतिक्रिया कस्तो दिन्छ, त्यो बुझ्नुस् र त्यही अनुसारको खाना रोज्नोस्।
अर्को कुरा, दिनको तीनपटक हरियो सागपात र फलफूल खानुहोस् । यसले शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ । गेडागुडी, फाइबर र मासुमा पनि ध्यान दिनुहोस्।
५. आफूलाई शिक्षित बनाउनोस्
आफ्नो शरीर, दिमाग, आत्मा, पौष्टिक आहार, व्यायाम, पुरातन दबाई र आयुर्वेदबारे सक्दो जानकारी लिनुहोस् । कारण, आफ्नो मोटोपन घटाउन वा स्वस्थ रहन यस्ता कुराहरु उपयोगी हुन्छन् । किताब पढ्नुस्, व्लग पढ्नुस्, सेमिनार जानुस, कक्षा लिनुस् । तर यसलाई केबल श्रोेतको रुपमा लिनुस्।
६. निरन्तरता दिनुहोस्
स्वस्थ जीवन कायम गर्न निरन्तर लागि पर्नुपर्छ । जीवन परिवर्तन गर्ने उपाय यही हो । स्वस्थ्य जीवन नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । स्वस्थ्य जीवन तपार्इंको महत्वपूर्ण हिस्सा हो भने यसले अवश्य प्राथमिकता पाउँछ । नयाँ जीवन पाउन वा बनाउन कहिल्यै ढिलो गर्नु हुँदैन।
७. सहयोगी बनाउनोस्
स्वस्थ हुने यात्रामा सफलता त्यसबेला मिल्छ जुनबेला तपार्इंलाई साथ दिने मान्छे हुन्छन् । साथ दिने मान्छेहरुको सञ्जाल बनाउनोस् । आफ्नो यात्रालाई टेवा पुग्ने र प्रभाव पार्ने साथी पत्ता लगाउनोस् । फेसबुक र ट्वीटरमा स्वास्थ्य टिप्स्बारे सल्लाह गर्नोस् । जीवनलाई स्वस्थ बनाउन किन पछि हट्ने?
Posted by Becoming Kishor at 5:55 PM
No Comment to " जीवन सुखद बनाउने ७ तरिका "